★မြန်မာ့အလင်း★: အခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်နေတာ ရှက်တတ်စမ်းပါ
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ရခိုင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ရှမ်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ကရင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ကချင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ မွန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ကယားတွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
☀ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ငါတို့ ချင်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ တခုခုလုပ်ပေး ရအောင်ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောကြစမ်းပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:03 AM
☀ ပလီဆရာတွေက ကုလားလေးတွေရဲ့စအိုပေါက်ကို မုဒိမ်းကျင့်တာ အစဉ်အလာဖြစ်နေတယ်လို့ ပါကစ္စတန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးက တီဗီပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်။ ကုလားမလေးတွေကို အဖေက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ကုလားလေးတွေကို ပလီဆရာကဖင်ချတယ်ဆိုပဲ :P
☀ ကုလားအဖြစ်ကသနားဖို့ကောင်းတယ်။ quran ကျမ်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို မသတ်ရဘူးလို့ ရေးထားတာကို အမှန်အတိုင်း ပြောရင် သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ လူတွေကို မသတ်ဖို့ တားမြစ်ထားတယ်ဆိုပြီး လှည့်ပတ်ပြောနေရတယ် :P
☀ မွတ်ဆလင်တို့သည် ဗုံးခွဲခြင်း၊သတ်ဖြတ်ခြင်းနည်းများကိုသုံး၍ ဝေဖန်မှုများကိုဖြေရှင်း၏။ ဗုံးခွဲ၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်၍မရသော အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုများကိုကြုံတွေ့သော် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ အရူးလိုပြုမူကုန်၏ :P
☀ မြတ်ဗုဒ္ဓက ကုလားပြည်ကို ခရီးသွားခဲ့လို့ ကုလားလို့ စွတ်စွဲတာ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကုလားတွေ မြန်မာပြည်ကို ချေးလာကျူံးတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုပါ။ မွတ်ဆလင်တွေ ကုလားပြည်ကို ပြန်ကြပါ :) :) တာ့တာ
☀ သွေးလှူတဲ့နေရာမှာ ခေါင်းဖြတ်၊ ခြေဖြတ်၊ လက်ဖြတ်လုပ်ပြီး သတ်ပါလို့ရေးထားတဲ့ quranကျမ်းကို မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ရွတ်ရဲတဲ့ သတ္တိုကို ချီးကျူးပါ၏။ ၀ါးဟားဟား :D :D :D
☀ ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား၊ချင်းတို့သည် အခွင့်အရေး ထိုင်တောင်းတာကို ပြည်ထောင်စုဟု ထင်ကြ၏။ ထိုငပျင်းနှင့်ငဖျင်းတို့သည် အမဲရိုးက ဟင်းအိုးကို အားမနာပဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လိုသည်ဆိုပဲ :glad:
☀ မင်းတို့တွေစကားပြောတိုင်း ပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးစုအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းနေကြတာ မယုံနိုင်စရာပဲ။ တိုင်းပြည်အရေးကို နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတာ မသိကြဘူးလား? ဖြေစမ်းပါ :)
☀ ငါက ဗမာလူမျိုးစုအတွက်ပဲ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်းတို့သိတယ်။ ငါပြောတာမှန်ရင် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ လက်ခံပါ။ ငါပြောတာမှားရင် ဒီမှာပြန်ပြောပါ။ အခြောက်တွေလို ကွယ်ရာမှာ စောက်တင်း မတုတ်နဲ့ :)
☀ အခွင့်အရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်၍တိုက်ပွဲဝင်၏။ အခွင့်အရေးအတွက် အဖြူများ၏ရှေ့မှာငိုပြ၏။ မွေးရာပါဝါသနာမှာ ဖိုးဖွားပိုင်မြေကိုလက်ညှိးထိုး၍ အခွင့်အရေးတောင်းခြင်းဖြစ်၏။ [b]တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှမလုပ်ပါ။[/b] ;)
☀ မင်းတို့တွေမြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ရင် ပင်လုံစက္ကူစုတ်ကို လက်ညှိးထိုးပြီး အခွင့်အရေးပဲ တောင်းမနေနဲ့။ တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးအရေးကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်ပါ။ အလုပ်လုပ်မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ် :)
☀ နိုင်ငံရေးမှာ ကချင်ပါတီ၊ရှမ်းပါတီ၊ရခိုင်ပါတီ၊ မွန်ပါတီ၊ချင်းပါတီ၊ကယားပါတီ။ လူမှုရေးလုပ်တော့ ကရင်အဖွဲ့၊ကချင်အဖွဲ့၊ ရှမ်းအဖွဲ့၊ရခိုင်အဖွဲ့၊မွန်အဖွဲ့၊ကယားအဖွဲ့၊ချင်းအဖွဲ့တဲ့။ လူမျိုးရေးမျက်ကန်းတွေပဲ :)
☀ ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား၊ချင်းတို့သည် ဗမာကိုပြောချင်တိုင်းပြော၏။ ဝေဖန်ချင်တိုင်းဝေဖန်၏။ ဆဲချင်တိုင်းဆဲ၏။ ဗမာကခေါင်းငုံ့ခံပေးမှ ကျေနပ်သည်။ သို့သော်သူတို့ကို နည်းနည်းဝေဖန်သော် စိတ်တိုကျ၏ :P
☀ လူများစုဖြစ်သော ဗမာတို့သည် ဗမာနိုင်ငံဟုခေါ်ပြီး ဗမာစာကို ရုံးသုံးစာအဖြစ် သတ်မှတ်ခွင့်ရှိသည်။ လူနည်းစု၏အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုနေသူများသည် လူများစု၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားဖို့လို၏ :cool: သဘောထားကြီးကြပါ
☀ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဖင်ယားပြီး [b]ကလေးလိုလို ခွေးလိုလို စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူတို့အခွင့်အရေးပဲ သိတဲ့ကောင်တွေကို[/b] ခွဲထွက်ဖို့ ပင်လုံစက္ကူစုတ်ကို လုပ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်လား? စဉ်းစားပါ :)
☀ ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား၊ချင်းတို့သည် လူမျိုးနာမည်ကို ပြည်နယ်၏နာမည်လုပ်၏။ သူတို့သင်္ကေတကို ပြည်နယ်၏ သင်္ကေတလုပ်၏။ သူတို့စာကို ပြည်နယ်၏ စာလုပ်၏။ ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးသည် :)
☀ ကရင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် နာမည်များသည် ထိုပြည်နယ်များအတွင်းမှ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ တရားမျှတဖို့ ပြောင်းဖို့လို၏ :)
☀ ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား၊ချင်းတို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအရေးကို ဂရုမစိုက်ပါ။ မိမိပြည်နယ်နှင့်လူမျိုးစု၏ အခွင့်အရေးပဲတောင်းဆို၏။ တောင်းတိုင်းမရသော်စိတ်ဆိုး၏။ အဆင့်နိမ့်သောနိုင်ငံသားများဖြစ်၏ :)
☀ ကရင်၊ကချင်၊ရှမ်း၊ရခိုင်၊မွန်၊ကယား၊ချင်းတို့သည် အခွင့်အရေးပဲတောင်းကြသည်။ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ကျေပွန်ဖို့လုံးဝမစဉ်းစားပါ။ သူတို့အခွင့်အရေးကိုကြည့်ကာ နအဖရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ခဲ့၏။ အတ္တတွေ ကြီးလှပေ၏ :)
မင်းပထွေးသန်းရွှေသာလျှင် အကောင်းဆုံးလို့ ပြော
လိုက်ပါတော့လား မအေလိုးရဲ့ ............
မင်းတို့ တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ငါတို့ အားလုံးသိပြီးသားကွ ရှင်းပြီလား....
မင်းတို့ ကောင်တွေခုဘဝမှာလဲ မအေးချမ်းနိုင်သလို
နောင်တမလွန်ရောက်ရင်လဲ ငရဲမှာ ဂျိုးကတ်မဲ့
ကောင်တွေ.....မင်းတို့ လုပ်တဲ့ အကုသိုလ်တွေက
မင်းမိသားစုကိုပါ ပူလောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ မင်းမမေ့
Stop Burmanization said...
အခွင့်အရေးတောင်ရလောက်အောင် မင်းတို့ဟာအခွင့်အရေးဖန်တီးရှင်တွေများထင်နေကြတာလား။သိပ်လေ့ဘဝင်လေမဟတ်နဲ့။ အခွင့်အရေးတောင်းတယ်ဆိုတာက ဘာမှမလုပ်ဘဲ လူများပစ္စည်း တခြားလူပိုင်တဲ့ပစွည်းကို ရလို့ရငှားတောင်းတာကို အခွင့်အရေးတောင်းတာလို့ခေါ်တာ။ ငါတို့က ငါတို့ဆီကခိုးယူသွားတဲ့ လုယူသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပေးဖို့တောင်နေတာ။ အခွင့်အရေးတောင်းတာနဲ့ အတင်းအဓ္ဓမယူထားတဲ့အရာကိုပြန်တောင်းတာမတူဘူးဆိုတာတောမင်းပညာတတ်ရင်သိထားဖို့သင့်တယ်။ ရခိုင်က ရခိုင်ပါတီမတည်ဘူး ရခိုင်တွေက ရခိုင်အတွက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူအတွက်လုပ်ရမှာလဲ? မင်းတို့လေ့ မင်းတို့မြန်မာ(ဗမာ)တွေအတွက်ဘဲလုပ်နေတာဘဲမဟုတ်လား? အတင်းလုယူ၊ လိမ်လည်ထားတဲ့ အရာတွေကို မဆုံးရူံးရအောင် ဝါဒဖြန်း စည်းလုံးနေတယ်ဆိုတာ တိုင်းရင်းအမျိုးသားတိုင်သိတယ်။ ပြောဖို့အချိန်မတန်သေးလို့စောင့်နေကြတာဘဲရှိတယ်။
ပြည်ထောင်စုစကား၊ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကို မင်းတို့(ဗမာ)မြန်မာတွေသိပ်ပြောနေကြတယ်။ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲ? ပြည်ထောင်စုဆိုတာဘာလဲ? မင်းတိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလက်ခံပြီးလား? ပြည်ထောင်စုဆိုတာ မတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းပြည်တွေ စုထားတဲ့ အစုတွေဆိုတာမင်းနားပြီလား? ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့က ပါးစပ်ကမပြောဘဲ လက်တွေ့ကျကျ ဘာတခုလုပ်ထားလို့လဲ? ငါတို့လုပ်နေတွေကွ၊ ငါတို့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ပြောနေတယ်လို့လာမပြောနဲ့။ ကုန်းဘောင်းခေတ်မဟုတ်တောဘူး။ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ထားဖို့ ပြည်ထောင်စုအတွက်လုပ်ဖို့ဆိုတာ သာတူညီမျှလက်ခံထားတဲ့ဘုံစနစ်တခုရှိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီစနစ်ကရှိပြီလား? ဘုံတူညီတဲ့ပန်းတိုင်းမရှိဘဲ ငါတို့ဘယ်နေရာသွားကြမှာလဲ? ကိုင်...ဥပမာတခုပြောပြမယ်။ အခုမင်းတို့ပြောနေကြတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးထဲ့မှာ ဗမာ ၅၀% ရှိတယ်။ အများစုပေါ့။ဒါကြောင့်ဗမာ(မြန်မာ) စကားပြောရမယ်လို့မင်းတို့ကပြောတယ်။ ငါတို့အလျောပေးမယ်။ ပြောမယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ဘာသာစကားကိုငါတို့ပြည်နယ်မှာသုံးခွင့်ပေးဖို့မင်းတို့ဒီမိုးတွေကကြည်ကြည်ဖြူဖြူရှိုပြီလား? ဒါမင်းတို့ကိုမင်းတို့အယင်းမေး။ မြန်မာ(ဗမာ) အများစုမိုးလို့ မြန်မာ(ဗမာ)စကားဘဲပြောရမယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့နယ်မြေ ၇၀% ကိုငါတို့ (ကချင်၊ကယား၊ကယင်၊ချင်း၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်း) တိုင်းရင်းအမျိုးသားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကို မင်းလက်ခံရဲလား။ ဒီလောက်ငါတို့ဘိုးဘွားတွေ သွေးချွေးတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကို မင်းတို့က ပြည်နယ်ခုနှစ်ခု တိုင်းခုနှစ်ခုဆိုပြီးတောသတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါကိုမင်းတရားတယ်လို့ထင်သလား? မင်းတို့သာစစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှိရင် ဘာတွက် ပြည်နယ် ၈ ခုမရှိဘဲ တိုင်း ၇ ခုယူထားရတာလဲ? ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့မင်းတို့က ဒါတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အသင်ရှိပြီလား? မရှိဘူးဆိုရင်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်မပြောနဲ့။ ဒါကုန်းဘောင်းခေတ်မဟုတ်ဘူး။ ကိုင်....ငါပြောတဲ့ထည့်မှာ အခွင့်အရေးဆိုတာပါလား? ပြည်ထောင်စုအတွက် အခွင့်အရေးတောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလွယ်လွယ်မသုံးနဲ့။ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံအောင်ပြောဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်။ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်မရှိဆုံးလူမျိုးစုဟာ မင်းတို့(မြန်မာ)ဗမာတွေဘဲ။ မင်းတို့လေ့မင်းတို့အသိုင်းအဝိုင်း မင်းတို့ဘာသာစကား မင်းတို့ယဉ်ကျေးမူတွေ ကိုမြတ်နိူးသလို ငါတို့တိုင်းရင်းအမျိုးသားတွေလေ့ထပ်တူထပ်မျှပါဘဲ။ ကိုယ်ချင်းစာသင့်တယ်။ အခွင့်အရေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ကလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းချင်ရင်ငါတို့လေ့ လက်နက်ကိုင်ရမှာဘဲ။ ကိုင်လေ့ကိုင်နေကြတယ်။ အားကြီးမယ်။အားနည်းမယ်။ တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အတိတ်ကနေ ခုအချိန်ထိ မင်းတို့နဲ့ ငါတို့ တိုိင်းရင်းအမျိုးသားတွေရဲဆက်ဆံရေးဟာ သုညဘဲ။ ဘယ်သူကစပြောင်းလဲမလဲ။ မင်းတို့ကိုငါတို့အနိူင်ကျင့်နေတာလား? မင်းတို့ကငါတို့ကိုအနိူင်ကျင့်နေတာလား? ဒီ mindset တခုလုံးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့တွေးရဲပြီလား? မပြောင်ရဲဘူးဆိုရင် ဆိုးကျိုးကိုတောညီတူညီမျှခံစားကြရမှာဘဲ။ အခွင့်အရေးတောင်းတာလား? ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို ပြန်ပေးဖို့တောင်းတာလား ဆိုတာကွဲပြားအောင်အယင်စဉ်းစားသုံးသပ်ပါ။ မင်းပညာတတ်ရင် အခွင့်အရေးသမားဟာ ငါတို့(ကချင်ကယား....)တိုင်းရင်းအမျိုးသားတွေလား။ မင်းတို့(မြန်မာ)ဗမာတွေလားဆိုတာမင်းသိဖို့အချိန်တန်ပြီ။
မင်းတို့ ရခိုင်ယောကျားတွေ စောက်ကျင့်က ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမလုပ်ရဲဘူး။ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဗမာတွေအကြားလိုက်ပြီး ခြေထိုးသွေးခွဲလုပ်နေတဲ့ မြေခွေးလိုကောင်တွေပဲ။ မြန်မာနဲ့ ဗမာမတူဘူး။ ဘာမှ ရူးကြောင်ကြောင် အတူတူလုပ်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ ရေးမနေနဲ့။ သိပ်ပြီး အဲလောက် ဒေသနာမည်ကို အစွဲအလန်းကြီးနေရင် မင်းတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို .. ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားငယ်လေးတွေကိုယ်စားပြုတဲ့ နာမည်ကို စံပြအဖြစ် ပြောင်းပြလိုက်စမ်းပါ။ လုပ်ပေးမလား?
စောက်ပျင်းရေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက သံယံဇာတ မင်းတို့ မပိုင်ဘူး။ ဗမာတွေဒေသထွက်တဲ့ သံယံဇာတလဲ ဗမာတွေမပိုင်ဘူး။ မင်းပြောပုံအရဆိုရင် အာရပ်နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ အလုပ်မလုပ်ပဲ ရေနံပဲရောင်းပြီး ထိုင်စားနေကြမှာပေါ့။ ဘယ်နိုင်ငံက ပြည်သူမှ သူတို့ သံယံဇာတကို သူတို့ မပိုင်ပါဘူးကွာ။ စောက်ပျင်းကြီးတဲ့ မင်းတို့အဖိုးအဖွားတွေ လျှောက်ပြောထားတာတွေကို စောက်ဖျင်းဖြစ်တဲ့ မင်းတို့က အဟုတ်ထင်နေတာကိုး။ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတွေ ဘာတွေနဲ့ ပေါက်ကရတွေ ပြောမနေနဲ့။ ဘာမှမလုပ်တဲ့ စောက်ပျင်း၊ စောက်ဖျင်း တွေကို ဘာမှ ပေးစရာမလိုဘူး။
ရခိုင်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပဲ လုပ်ရမယ်လို့ လက်ခံနေတယ် ဆိုရင် ငါတို့ဗမာတွေ အုပ်စိုးထားတဲ့ အချိန်မှာ မင်းတို့ ရခိုင်ကို ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ပဲ။ မင်းစကားအတိုင်းပဲ ရခိုင် စောက်ပျင်း၊ စောက်ဖျင်းတွေအတွက် ဗမာအစိုးရက ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတွေ ဘာတွေနဲ့ ပေါက်ကရတွေ ပြောမနေနဲ့တော့။
မင်းတို့ ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားငယ်လေးတွေကို မင်းတို့ ဘာလုပ်ပေးလဲ? တန်းတူအခွင့်အရေးပေးဖို့ နေနေသာသာ အဲဒီတိုင်းရင်းသားငယ်လေးတွေရဲ့ နာမည်တောင် ထုတ်မပြောဘူးလေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရခိုင်ကပဲ အုပ်စိုးထားတယ်မဟုတ်လား? ဗမာပြည်ကြီးထဲမှာ လူဦးရေ ၂%ပဲရှိတဲ့ ရခိုင်ကို စကားထဲတောင် ထည့်ပြောဖို့မလိုပါဘူးကွာ။ ဗမာပြည်ကြီးထဲမှာ ဗမာပဲ အုပ်စိုးရမှာပဲ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်စာကို သုံးခွင့်ပေးရမယ်? စောက်ပျင်း၊ စောက်ဖျင်း ရခိုင်ရေ . . . ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ့်ဘာသာစကားပဲ သုံးကျ စတမ်းဆိုရင် . . . . ကမ္ဘာမှာ ရုံးသုံးစကားကို ဘာအတွက် သတ်မှတ်နေကြ လဲကွာ။ မင်းတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလဲ တိုင်းရင်းသားငယ်လေးတွေ နေတဲ့ မြို့တွေ၊ ရွာတွေမှာ သူတို့ ဘာသာစကားပဲ သုံးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ ကျောက်ခေတ်ကို ဦးတည်နေတဲ့ အတွေးတွေပဲနော်။ မင်းတို့ စောက်ပျင်း၊ စောက်ဖျင်းတွေ ပြောတဲ့ စကားတွေက ရယ်စရာတွေချည်းပါလား။ ၀ါးဟားဟား
စောက်ပျင်းစောက်ဖျင်း unionofwhat အတွက် အကျဉ်းချုပ်။
☀ လူနည်းစုအခွင့်အရေးကို သိပ်ပြီး အလေးထားနေရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခမီပြည်နယ်၊ သက်ပြည်နယ်၊ ဒိုင်းနက်ပြည်နယ် စသဖြင့် စံပြအဖြစ် ပြောင်းပေးပါ။ ရခိုင်ဘာသာစကားအစား သက်စကား၊ ခမီစကား၊ ဒိုင်းနက်စကားတွေကို ပြောပေးပါ။
☀ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတွေဘာတွေ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ ဘာမှမလုပ်တဲ့ စောက်ပျင်း၊ စောက်ဖျင်းတွေကို ဘာအခွင့်အရေးမှ မပေးနိုင်ဘူး။ ငါ့စကားကို ရှင်းသလား?
☀ လက်တွေ့ကျကျပဲပြောမယ် . . ကမ္ဘာလုံးမှာ ဘယ်ပြည်သူမှ သံယံဇာတတွေကို ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ သံယံဇာတကို ရခိုင်တွေမပိုင်ဘူး။ မြန်မာ အစိုးရပဲ ပိုင်တယ်။
☀ ရခိုင်တွေက မိမိပြည်နယ်နဲ့ မိမိလူမျိုးစုလေးအတွက်ပဲ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်မဟုတ်ဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းတာ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် ဗမာတွေကလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူး။ သဘောတူလား?
☀ ရုံးသုံးစာကို အသုံးမပြုပဲ မိမိစာပေကိုပဲ မိမိဒေသမှာ သုံးရမယ်ဆိုတာ အဓိပါယ်မရှိဘူး။ ကမ္ဘာမှာ ရုံးသုံးစာဆိုတာ ဘာအတွက် လုပ်နေကြတာလဲ? မင်းတို့ပြည်နယ်ထဲမှာနေတဲ့ သက်၊ ခမီ၊ ဒိုင်းနက်လူမျိုးစုတွေရဲ့ မြို့ရွာတွေမှာလဲ သူတို့စာပေကို သူတို့သုံးခွင့်ပေးနိုင်မလား? တရွာကို ဘာသာစကား တမျိုးစီဖြစ်နေမယ်။ ကျောက်ခေတ်ကို ပြန်သွားချင်ရင် စောင့်ကန်ခံရမယ်။ သတိထားပါ။
☀ မင်းတို့တွေရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ဆောင်းပါးတွေထဲမှာ ရခိုင်လူမျိုးကိုပဲ ဖေါ်ပြပါတယ်။ ရခိုင်စကားကိုပဲ အသုံးပြုတယ်။ ဒိုင်းနက်၊ သက်၊ ခမီ၊ ဗမာ တို့ကို လုံးဝမဖေါ်ပြဘူး။ မင်းတို့က ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲမှာ ရခိုင်မဟာဝါဒကို ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ ဗမာတွေကို အံတုနေတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်. . . ငပျင်း၊ ငဖျင်းတွေကို သနားတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မင်းလုပ်ထားတဲ့ဆိုဒ်က မင်းတို့ရဲ့ ဘဝသရုပ်မှန်ကိုပြနေတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းစကားတွေသိပ်မပြောခင် ကမ္ဘာကြီးဟာ လုံးသလား? ပြားသလား? အယင်လေ့လာလိုက်အုံး။ ငါပေးထားတဲ့လိင်ဂ်တွေလေ့လာလိုက်ရင် မင်းတို့ကောင်းတွေဘယ်နေရာရောက်နေလဲသိလာမှာပါ။ ထပ်ပြောလိုက်အုံးမယ် စကားတွေသိပ်မပြောခင် ကိုယ့်အကြောင့်ကိုယ်သိအောင်လုပ်ထားပါအုံး။
ဗမာကို လူမျိုးရေး မုန်းတီး နေတဲ့ စောက်ကျဉ်း unionofwhat။ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှမလုပ်ပေးပဲ အခွင့်အရေးပဲ ထိုင်တောင်းနေတဲ့ စောက်ပျင်း unionofwhat ။ ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ ငဖျင်း unionofwhat ရေ . . . . ဗမာတွေက ဗမာ့အကြောင်းကို မသိတာ မင်းအပူလား? မင်းရဲ့ပထွေးဗမာတွေ အတွက် အဲလောက်အထိ ဦးဏှောက် အရှုပ်မခံပါနဲ့ကွာ။ ၀ါးဟားဟား
မင်းတို့ရခိုင်တွေက ဗမာတွေထက် ပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုရင် ပါးစပ်နဲ့မပြောနဲ့။ နားညီးတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခမီပြည်နယ်၊ သက်ပြည်နယ်၊ ဒိုင်းနက်ပြည်နယ် အဖြစ်နာမည်လေးပဲ ပြောင်းအောင် လှုပ်ရှားကြစမ်းပါ။ ဟုတ်ပြီလား။
အမှန်တရားကိုထောက်ပြတိုင်း ဗမာ(မြန်မာ)မုန်းတီးရေးလို့ ကင်းပွန်းတပ်တာ မင်းတို့ဗမာ (ဗမာ)တွေရဲ့စောက်ကျင့်ဆိုတာ တခြားအမျိုးသားတွေကိုထားလိုက် ပညာနည်းနည်းပါးပါးတတ်တဲ့မင်းတို့ ဗမာ(မြန်မာ)တွေတိုင်းသိတယ်။ မင်းလို့ကောင်ကတောသနားဖို့အယမ်းကောင်းတယ်။ နိူင်ငံတနိူင်ငံရဲ့အဆင့်၊ ပြည်နယ်တခုရဲ့အဆင့် ကိုမသိဘဲနဲ့ ရှေ့ဗမာ(မြန်မာ)ကြီးတွေလို ဘဲပြည်ထောင်စုစိတ်လားဘာလားလုပ်နေတယ်။ မင်းကိုယ်မင်း သိပ်တတ်ပါတယ် တော်ပါတယ်လလို့မယူဆခင် ပြည်နယ်ဆိုတာ ဘာလဲအယင်သိအောင်ကြိုးစားပါအုံး။ မင်းတို့ရဲ့သီအိုရီကို တိုင်းရင်းအမျိုးသားတိုင်းနားလည်တယ်။ ဗမာ(မြန်မာ)တွေရဲ့သီအိုရီ.......
အမှန်တရားကိုပြောခြင်း = ဗမာ(မြန်မာ) မုန်းတီးရေး
စောက်ကျဉ်း၊ စောက်ပျင်း၊ စောက်ဖျင်း unionofwhatရေ… မင်းက စကား သိပ်များတဲ့ ကောင်ပဲ။ မင်းတို့ပြောတဲ့ စကားအတိုင်း စံပြလုပ်ပြစမ်းပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခမီပြည်နယ်၊ သက်ပြည်နယ်၊ ဒိုင်းနက်ပြည်နယ် အဖြစ်နာမည်ကို ပြောင်းဖို့ လှုပ်ရှားကြစမ်းပါ။ ကဲ.. ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဖျောက်ပစ်ဖို့ကိစ္စ ဘယ်တော့လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာပဲ ဖြေပေးပါ။ ဟုတ်ပြီလား?
ငါလိမ်၊ငါဝါ၊သူခိုးကြီးရေ။ မင်းကိုသိပ်ပြောချင်နေတယ်လို့မထင်နဲ့။ ငါတို့အကြောင်းမပါရင်ဝေးဝေးနေပေးနော်။ ဟဟ.. နှစ်ပေါင်း၅၀၀၀ ကျော်နေလာခဲ့တဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဘာပြသနာမှမရှိခဲ့ဘူး။ မင်းတို့ရဲ့ကလိမ်ကကျစ်နိူင်ငံရေးကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာ။ လူတစ်သောင်းတောင်မပြည်တဲ့ခမီးအမျိုးသားတွေကို ပြည်နယ်ပေးကြည့်ပါဆိုတဲ့မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကတောမဆန်းတောပါဘူး။ ဘုရားကိုနှုတ်ခမ်းမွေးတပ်တဲ့အယူအဆမပယ်သေဘူးလား။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်ဒီလိမ့်ဂ (်Nationalities and Buddhism under Burmese Militarilism ကိုထပ်ဖတ်ကြည့်ပါအုံး...ဟဟဟ
မဟာရခိုင်ဝါဒီကြီးက ခမီကို လူ တစ်သောင်းမပြည့်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခမီတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖေါက်နေပြီ။ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ။ လူနည်းစု အခွင့်အရေးကို လေးစားတဲ့ ရခိုင်ကြီးက ခမီတွေကို နှိမ်ချဆက်ဆံနေပါလား။ တော်တော်ကို ရယ်ရတာပဲ။
မဟာရခိုင်ဝါဒီကြီးက ခမီတွေကို ပြည်နယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။ ကဲကွာ. . . ဒါဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို . . . သက်ပြည်နယ် . .ဒိုင်းနက်ပြည်နယ်အဖြစ် ပြောင်းလိုက်ပေါ့။ အဲဒါကို လက်ခံတယ်မဟုတ်လား? ဒီတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဖျက်ဖို့ ဘယ်တော့ စလုပ်ကြမလဲ? ထပ်မေးမယ်နော်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဖျက်ဖို့ ဘယ်တော့ စလုပ်ကြမလဲ? ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သက်ပြည်နယ်နဲ့ ဒိုင်းနက်ပြည်နယ်အဖြစ် ဘယ်တော့ စပြီးပြောင်းမလဲ? ဖြေပေးပါနော်။ ၀ါးဟားဟား
Zaw Min Oo said...
ဒီဆောင်းပါးနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။ တိုက်တွန်းချင်တာလေး ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီကာလမှာ ငကျဉ်းတွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ် အဖြစ်ပြောင်းဖို့ လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ . . . . ပင်လုံညီညွတ်ရေးဆိုပြီး ပြောသံတွေ ဆူညံခဲ့တာ အမှတ်ရကြပါရဲ့လား? ပင်လုံစာချုပ်ကို နအဖက အဏာရှင်မိုလို့ မျက်ကွယ်ပြုပြီး . . . ငကျဉ်းတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားလို့ အလေးထားဟန်နဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ နအဖက ဒီမိုကရေစီ မကျလို့ သဘောတူညီမှု မရခဲ့သယောင်ယောင်လဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက မှားပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး တိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖေါက်နေတာက ငကျဉ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေက ကျောင်းမှာ သင်ထားတဲ့အတိုင်း ပင်လုံစာချုပ်ကို အကောင်းမြင်နေလို့ နိုင်ငံရေးကိစ္စ တွေအပေါ် လွဲမှားစွာနဲ့ သုံးသပ်နေကြတာပါ။ မြန်မာပိုင်တဲ့ အာသန် မနိပူနယ်မြေတွေကို အိန္ဒိယကိုပေးပြီး နိုင်ငံအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးတာ အင်္ဂလိပ်တွေပါ။ စဉ်းစားဖို့က တိုင်းရင်းသားတွေကို ခွဲထွက်ခွင့်ပေးရမယ့် ပင်လုံစာချုပ်ကို အတင်း ချုပ်ခိုင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် တောင်တန်းဒေသတွေကို လွတ်လပ်ရေး အတူတူ မပေးဘူးတဲ့။ ပင်လုံစာချုပ်လဲပြီးရော. . တိုင်းရင်းသားတွေက ယုံကြည်လေးစားပြီး . . . မြန်မာပြည်ကို စည်းလုံး ညီညွတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျာ။ နယ်ခြားစစ်ဖြစ်အောင် အိန္ဒိယကို နယ်မြေတွေ ပေးခဲ့တာ၊ ပင်လုံစာချုပ်လုပ်ခိုင်းတာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်ခဲ့တာ၊ ခွဲထွက်ဖို့လုပ်တဲ့ သူပုန်တွေကို ထောက်ပံ့ခဲ့တာ.. စတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လိုဖြစ်အောင် လုပ်နေလဲဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ငကျဉ်းတွေကလဲ ဦးဏှောက်မရှိဘူး။ ဗမာကို လူမျိုးရေး မုန်းတီးပြီး ပဒေသရာဇ်ခေတ်က သူတို့ ညံ့ဖျင်းလို့ သတ်ခံရတာကို ရန်ငြိုးထားနေတဲ့ အူကြောင်ကြောင်တွေလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လုံစာချုပ်ပြပြီး ခွဲထွက်ဖို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့လို့ ၁၉၆၂မှာ တရုတ်အစစ်ကြီး ဦးရှုမောင် အဏာသိမ်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ မြန်မာပြည်ကြီးဟာ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပဲ။ အကြွင်းမဲ့အဏာရလို့ ဦးရှုမောင် အဏာရှင်ဖြစ်သွားတာ သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ အဏာရှင်ကို ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ ငကျဉ်းတွေသာ သမိုင်းရဲ့တရားခံလို့ မြင်ပါတယ်။ ငကျဉ်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ သစ္စာမရှိဘူး။ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ တာဝန်လဲ ကျေပွန်ရမှန်း မသိပါဘူး။ သူတို့လူမျိုးစုနဲ့ နယ်မြေအကျိုးပဲ သိနေတဲ့ အတ္တသမားတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့က အကျပ်ကိုင်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရန်တိုက်ထားတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆန့်ကျင်ပါ။ တိုင်းပြည်ခွဲလိုတဲ့ ငကျဉ်းတွေကို တိုင်းပြည်က ဘာအခွင့်အရေးမှ ပေးစရာလိုဘူး။ ငကျဉ်းတွေ ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်ခံနေမယ်.. မြန်မာပြည်ကနေ ခွဲထွက်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေမယ်ဆိုရင် တန်းတူအခွင့်ရေးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ရာဇသံပေးပါ။ ပင်လုံစာချုပ်ကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့ နအဖလုပ်ရပ်ကိုလဲ ထောက်ခံကြပါ။ လုပ်သင့်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြပါဗျာ။
@ Stop Burmanization
မင်းကလဲ မြန်မာပြည်အတွက် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံပြီး BBC ကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာ သွေးရိုးသားရိုး ထင်နေသလား? အဖြူတွေက သူတို့ သားအရင်းတောင် ပိုက်ဆံကို အလကား မပေးဘူး။ မင်းတို့ကို သားရင်းထက် ပိုချစ်နေလို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျခံနေတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား စဉ်းစားပါ။ အေး. . မင်းတို့က ဖယ်ဒရယ်စံနစ်ကို ဘာမှန်းမသိတဲ့သူတွေဆိုတော့ BBC ကိုအထင်ကြီးနေမှာပဲ။ ငါပြောပြမယ် နားထောင်ပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ခွင့်လို့ ဗမာအများစုက မယူဆပါဘူး။ ပင်လုံစာချုပ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို ခွဲထွက်ခွင့်ပေးထားလို့ ရှုပ်ကုန်တာပါ။ အဲလိုပြဿနာတွေရှုပ်အောင် အင်္ဂလိပ်ကပဲ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ အင်္ဂလိပ်သွေးခွဲထားတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို အကောင်းမြင်နေတရွေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြဿနာကို မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားရင် . . ပြည်နယ်တွေ ခွဲထွက်ခွင့် ပေးထားတာ အဓိပါယ်မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုစံနစ် ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးမှာ ဗဟိုအစိုးရကပဲ အဏာရှိပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်ဟာ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ သြဇာအောက်မှာပဲ နေရပါတယ်။ ငါ့မြို့ကို ငါကြိုက်သလို အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ထို့အတူပဲ ပြည်နယ်အစိုးရကလဲ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ သြဇာအောက်မှာပဲ နေရပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတွေကို ဗဟိုကပဲ ချုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ဗဟိုအစိုးရအတွက် အခွန်ငွေတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရတွေက ကောက်ခံပေးရပါတယ်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေမှာ ရန်တိုက်ပေးထားသလို ပြည်နယ်အစိုးရတွေဟာ မိမိပြည်နယ်အတွင်းမှာ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဗဟိုအစိုးရက သဘောတူမှ လုပ်ခွင့်ရှိတာပါ။ မိမိတို့ ဆန္ဒမပါပေမယ့် ဗဟိုအစိုးရက လုပ်ခိုင်းရင် လုပ်ပေးရပါတယ်။ အဲဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လုံစာချုပ်မှာ ရေးထားသလို ဗဟိုအစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ပုံကို မကျေနပ်ရင် ပြည်နယ်တွေကို ခွဲထွက်ခွင့်ပေးရမယ် ဆိုတာ ပြည်ထောင်စု စံနစ်နဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ စာမတတ်တဲ့ ငကျဉ်းတွေက သူတို့ပြည်နယ်အတွက် ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တောင် ထားခွင့်ရှိရမယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြသေးတယ်။ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ပုခုံးချင်းယှဉ်ပြီး တန်းညှိချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရက ဗဟိုအစိုးရနဲ့ တန်းတူဖြစ်နေရင် ပြည်ထောင်စုလို့ မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ ပြည်နယ်တွေက မိမိစိတ်ကြိုက် မိမိဖာသာလုပ်နေရင် . . တိုင်းပြည်တစ်ခုစီခွဲထောင်ထားတာနဲ့ အတူတူ ဖြစ်နေမှာပေါ့။
ဒါကြောင့် တန်းတူအခွင့်အရေးလိုချင်ရင် အင်္ဂလိပ်လုပ်သလို ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေကို ရန်တိုက်ပေးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟိုအစိုးရ ရာထူးနေရာတွေမှာ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး တန်းတူဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးကို ဦးတည်ပြီး လှုပ်ရှားရမှာပါ။ (မြန်မာဆိုသည်မှာ ဗမာ၊ ကချင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ ပလောင် စသည့် တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ရည်ညွှန်းပါသည်) ပြည်နယ်အစိုးရ ရာထူးတွေမှာလဲ မြန်မာအားလုံး တန်းတူ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင် လှုပ်ရှားကြရပါမယ်။ ဗမာလူမျိုးကပဲ ဗဟိုအစိုးရလုပ်ရမယ်။ ရှမ်းလူမျိုးကပဲ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ လုပ်ရမယ်။ ရခိုင်ကပဲ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ … လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကို တိုက်ဖျက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကျုပ်ပြောတာ သဘာဝကျလားဆိုတာ စဉ်းစားပါဗျာ။
ဒီစာရေးတာ မြန်မာအချင်းချင်း ရန်ငြိုးထားစေလို၍ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကြိုတင်ပြီး ပြောပရစေ။ တက္ကသိုလ်တွေကရေးထားတဲ့ နိုင်ငံရေး စာအုပ်တွေက လက်တွေ့မကျဘူး ဆိုတာ တကယ်ပါ။ ဒီမိုသမားဆိုရင် လူကောင်းဖြစ်တယ်။ စစ်သားဆိုရင် လူကောင်းဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ရိုးသားတယ်ဆိုတဲ့ စကား တွေဟာ လက်တွေ့မကျပါဘူး။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ စိတ်တွေ ကြီးနေရင် လူဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့လူမျိုးဆိုတဲ့ အစွဲအလန်းကြီးပြီး ဗမာကို မုန်းနေတဲ့ သူတွေရဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြပါမယ်။ ရခိုင်တစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ဗမာတွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ နာမည်မိုလို့ လက်မခံဘူးတဲ့။ ကျုပ်ကလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ နာမည်က ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဖျက်ပေးပါလို့ ပြောတဲ့အခါ ထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျာ။ ကရင်ဘိုးတော်ကြီးကလဲ ကော်မန့်မှာ ဗမာဘုရင်တွေ ရခိုင်တွေကို သတ်တဲ့အကြောင်း သုတေသနလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျုပ်ကလဲ သူ့စကားအတိုင်းပဲ KNU က ဗမာတွေကို သတ်တာတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်တွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေလို နှိမ်ချခဲ့ပုံတွေကို သမိုင်းသိအောင် ရေးပြဖို့ တန်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ လူမျိုးအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးတယ်ဆိုပြီး ကျုပ်ကို စွတ်စွဲတယ်ဗျာ။ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ ရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကရင်ဘိုးတော်ကြီးနဲ့ ဆီပုံးမှာ ဆွေးနွေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ (အောက်မှ အထက်သို့ ဖတ်ပါရန်။)
မင်းလိုသမိုင်းကိုမသိတဲ့ကောင်းကို ချင်းပြရတာ နွားပါးစောင်းတီးသလိုဘဲ။ မင်းလို့ကောင်းကများ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မူကိုလုပ်ချင်နေသလား။ မြန်မာ(ဗမာ) ဟာ မြန်မာဘဲ။ ငါတို့တတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။ မင်းမသိသေးရင် ဒီဟာကိုသွားဖတ်လိုက်။ http://www.scribd.com/doc/19812110/Burma-or-Myanmar1#open_download